အမျိုးသားများအတွက်အရေးကြီးသောအရာ (အမြိုးသားမြားအတှကျအရေးကွီးသောအရာ) | linyeikhtin
အမျိုးသားတွေ အတွက် အရေးကြီးဆုံး ကတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အာဟာရဓာတ် သုံးမျိုးကို မျှတအောင် စားသောက် နေထိုင်ခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး လိုက်စားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် တဲ့….
ဗီတာမင်စီဟာ နှလုံးရောဂါ မဖြစ်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကာကွယ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကို လေထု ညစ်ညမ်းမှု ဒဏ်မှလည်း ကာကွယ် ပေးပါတယ်။ အချဉ် အရသာရှိတဲ့ အသီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ဘရိုကိုလီ (အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်ဖီ) သခွားမသီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီနဲ့ စတော်ဘယ်ရီ သီးတွေမှာ ဗီတာမင်စီ အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။ သွပ် (Zinc) အမျိုးသား တွေရဲ့ မျိုးပွား နိုင်စွမ်းနဲ့ လိင် စွမ်းဆောင်မှုဟာ သွပ်ဓာတ် လုံလုံ လောက်လောက် ရရှိမှု အပေါ် မူတည် ပါတယ်။ သွပ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှ ရောဂါဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိအောင် လွှမ်းမိုး မှုလည်း ရှိပါတယ်။ ပင်လယ်စာ၊ အသည်း၊ မှို၊ နေကြာစေ့နဲ့ ပဲပိစပ် တွေမှာ သွပ်ဓာတ် အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။
မဂ္ဂနီဆီယမ်ဟာ နှလုံး ကြွက်သားတွေ စည်းချက် မှန်မှန် နှလုံးခုန်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဟာ အမျိုးသားတွေကို နှလုံး တိုက်ခိုက်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးရုံ သာမက နှလုံး တိုက်ခိုက်တာ ခံရရင်လည်း အသက်ရှင်နိုင်အောင် ကူညီ နိုင်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ် ဓာတ်တွေ များများ ရရှိအောင် ပင်လယ်စာ များများစားပါ။ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ဟင်းနုနယ်၊ ကောက်နှံ တစ်ခုလုံး၊ ပြောင်းဖူးနဲ့ ပဲအမျိုးမျိုး စားပေးပါ။
သင်စားတဲ့ အစာထဲမှာ အမျှင်ဓာတ်ကို လုံလုံ လောက်လောက် ရရှိရင် အူမကြီးကင်ဆာ၊ နှလုံး သွေးကြော ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အဝလွန်တာနဲ့ သွေးတိုးရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့ကျ နိုင်ပါတယ်။ အုတ်စပါးနဲ့ မုန့်ဆန်းလိုမျိုး ကောက်နှံတစ်ခုလုံး ပါဝင်စာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံ မျိုးစုံမှာ အမျှင်ဓာတ်တွေ အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။
အမြိုးသားတှေ အတှကျ အရေးကွီးဆုံး ကတော့ အောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ အာဟာရဓာတျ သုံးမြိုးကို မှတြအောငျ စားသောကျ နထေိုငျခွငျးနဲ့ ကနျြးမာရေး လိုကျစားခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ တဲ့….
ဗီတာမငျစီဟာ နှလုံးရောဂါ မဖွဈအောငျ နညျးမြိုးစုံနဲ့ ကာကှယျ နိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခန်ဓာကိုယျကို လထေု ညဈညမျးမှု ဒဏျမှလညျး ကာကှယျ ပေးပါတယျ။ အခြဥျ အရသာရှိတဲ့ အသီး၊ ငရုတျသီးစိမျး၊ ဘရိုကိုလီ (အစိမျးရောငျ ပနျးဂျေါဖီ) သခှားမသီး၊ ပနျးဂျေါဖီနဲ့ စတျောဘယျရီ သီးတှမှော ဗီတာမငျစီ အမြားအပွား ပါဝငျပါတယျ။ သှပျ (Zinc) အမြိုးသား တှရေဲ့ မြိုးပှား နိုငျစှမျးနဲ့ လိငျ စှမျးဆောငျမှုဟာ သှပျဓာတျ လုံလုံ လောကျလောကျ ရရှိမှု အပျေါ မူတညျ ပါတယျ။ သှပျဟာ ခန်ဓာကိုယျမှ ရောဂါဒဏျကို ခံနိုငျရညျ ရှိအောငျ လှမျးမိုး မှုလညျး ရှိပါတယျ။ ပငျလယျစာ၊ အသညျး၊ မှို၊ နကွောစနေဲ့ ပဲပိစပျ တှမှော သှပျဓာတျ အမြားအပွား ပါဝငျပါတယျ။
မဂ်ဂနီဆီယမျဟာ နှလုံး ကွှကျသားတှေ စညျးခကျြ မှနျမှနျ နှလုံးခုနျဖို့ အရေးတကွီး လိုအပျပါတယျ။ မဂ်ဂနီဆီယမျဟာ အမြိုးသားတှကေို နှလုံး တိုကျခိုကျမှု မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးရုံ သာမက နှလုံး တိုကျခိုကျတာ ခံရရငျလညျး အသကျရှငျနိုငျအောငျ ကူညီ နိုငျပါတယျ။ မဂ်ဂနီဆီယမျ ဓာတျတှေ မြားမြား ရရှိအောငျ ပငျလယျစာ မြားမြားစားပါ။ ပုစှနျ၊ ကဏနျး၊ ဟငျးနုနယျ၊ ကောကျနှံ တဈခုလုံး၊ ပွောငျးဖူးနဲ့ ပဲအမြိုးမြိုး စားပေးပါ။
သငျစားတဲ့ အစာထဲမှာ အမှငျြဓာတျကို လုံလုံ လောကျလောကျ ရရှိရငျ အူမကွီးကငျဆာ၊ နှလုံး သှေးကွော ရောဂါ၊ ဆီးခြိုရောဂါ၊ အဝလှနျတာနဲ့ သှေးတိုးရောဂါတှေ ဖွဈနိုငျခွေ လြော့ကြ နိုငျပါတယျ။ အုတျစပါးနဲ့ မုနျ့ဆနျးလိုမြိုး ကောကျနှံတဈခုလုံး ပါဝငျစာ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ သဈသီးဝလံ မြိုးစုံမှာ အမှငျြဓာတျတှေ အမြားအပွား ပါဝငျပါတယျ။
← သင့်ကိုအသက်ပိုရှည်စေမယ့်အစားအစာ၆မျိုး (သငျ့ကိုအသကျပိုရှညျစမေယျ့အစားအစာ၆မြိုး ) ထရိုဂျန်မြင်း (ထရိုဂနျြမွငျး) →